काठमाण्डौका यी ठाउँमा घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध, केहि ठाउँमा सिल गर्दै प्रहरी ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाण्डौका यी ठाउँमा घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध, केहि ठाउँमा सिल गर्दै प्रहरी !
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन क्वारेन्टाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको सो नगरपालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमित बढेसँगै क्वारेन्टाइन थप गर्न लागेको हो । नगर प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले क्वारेन्टाइनको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकामा हाल ४० श्ययाको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा गरेको छ । चन्द्रागिरि अस्पतालमा १५ र चुनदेवी माध्यमिक विद्यालय थानकोटमा २५ श्ययाको रहेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय र मनमोहन अस्पताल दहचोकमा क्वारेन्टाइन विस्तार गर्न लागेको छ । हाल चन्द्रागिरिमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिलाई बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको छ । हालसम्म सो नगरपालिकामा पाँचजनालाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि भएको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले हालसम्म ४८५ व्यक्तिमा कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ । नगरपालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै नगरपालिकालाई यही जेठ ७ गतेसम्म सिल गरिएको छ । नगरपालिका सिल गरेसँगै अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा १२० क्षमताको आइसोलेशन वार्ड स्थापना गरी कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरिँदै आएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणको जोखिम हुन नदिन सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन जारी गरेको थियो ।
कपनको तेन्जिङ चोक सिल गर्ने तयारी
कपनको तेन्जिङ चोक नजिक बसोबास गर्ने १८ वर्षीया युवतीको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएपछि उक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । सर्लाहीको रामनगर स्थायी घर भई हाल कपन बसोबास गर्दै आएकी उक्त युवतीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएपछि युवती बसोबास गर्ने क्षेत्रदेखि १५० मिटर वरपर सिल गरिएको बूढानीलकण्ड नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
युवतीको रिपोर्टमा पोजेटिभ आएपछि थप सतर्कता अपनाउनका लागि वडा सिल गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । भट्टराईका अनुसार, “आज ३ बजे बस्ने नगरपालिकाको बैठकले अब कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्नेछ । यसका लागि थप सुरक्षा अपनाउन वडा सिल पनि गर्न सकिनेछ ।” उक्त क्षेत्रमा एक टोलबाट अर्को टोलमा हुने आवतजावत रोक्नका लागि प्रहरी र स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले अपरिचित व्यक्ति गाउँ या टोल पसेको देखेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न तुरुन्त वडा कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको जोखिम मुलुकमा बढ्दै जाँदा एक महिलाको समेत मृत्यु भएको समयमा आफू पनि सुरक्षित रहने र आफ्नो गाउँ या समुदायलाई पनि सुरक्षित बनाउन नगरपालिकाले उक्त सूचना जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा चिया र मदिरा पसल पूर्णरूपमा बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ । किराना, तरकारी तथा खाद्यान्न पसल बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म मात्र खोल्न दिइने बताइएको छ । आवश्यक कामकाजबाहेक एक गाउँटोलबाट हिँडडुल गर्न र सार्वजनिकस्थलमा जमघट नहुन सूचनामा अनुरोध गरिएको छ ।
गोदावरीका औषधि पसल २४सै घण्टा खोल्न सकिने र कृषि तथा खेतीपातीसम्बन्धी कार्य गर्दा भीडभाड नगरी थोरै सङ्ख्यामा सामाजिक दूरी कायम राखी गर्न र गराउनसमेत अपिल गरिएको छ ।
आज र भोलि कोरोना परीक्षण हुँदै
गोदावरीमा आज र भोलि दुई दिन कोरोना परीक्षण गरिने भएको छ । कारोना महामारीको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षकर्मी, राहत वितरण कार्यमा खटिनुभएका व्यक्ति, औषधि पसल र फोहरमैला व्यवस्थापनमा कार्यारत मानिसलगायत कोभिड–१९ प्रभावित जिल्लाबाट आएका व्यक्ति, एम्बुलेन्स चालक, वडामा आएका नयाँ व्यक्ति, तरकारी बिक्री वितरणमा संलग्न व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिको आरडिटी र पिसीआर दुवै माध्यमबाट परीक्षण गरिने नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि थप गरिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै नागरिक जिल्ला–जिल्लामा फर्केसँगै अहिले उपत्यकामा राहत माग्नेको सङ्ख्या कम भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेमध्ये धेरै फर्किएकाले अहिले राहत चाहियो भन्दै आउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको उपत्यकाका नगरपालिका बताउँछन् ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दी दोस्रो÷तेस्रो सातामा पुग्दा उपत्यकामा राहत माग्ने धेरै थिए । तीमध्ये कतिपयले राहत नपाएको त कतिपयले पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका थिए । एकातिर उपत्यकाका नगरपालिकाले राहत माग्ने सबैलाई दिइएको बताएका थिए भने नागरिकले राहत पाउन झन्झट भएको बताएका थिए । अहिले आफूले माग्न आउनेलाई दिइरहे पनि राहत माग्न आउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको उपत्यकाको नगरपालिकाको भनाइ छ । पहिले बहालमा बस्ने व्यक्ति र न्यून वर्गमा मात्रै खाद्यान्नको अभाव भए पनि अहिले यो समस्या घरधनी र मध्यम वर्गमा समेत पुग्न थालेको पनि उनीहरुको अनुभव छ ।
चैतको ११ गते सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि पहिलो सातादेखि नै ललितपुर महानगरपालिकाले यहाँ बसोबास गर्ने विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न राहत बाँडेको थियो । एक चरणमा राहत वितरणपछि अर्काे चरणमा वडा वडाले बिहान र साँझ खाना खुवाएको प्रवक्ता राजु महर्जनले बताउनुभयो । महानगरका २९ वटै वडाले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने खाद्यान्न अभाव रहेका नागरिकलाई खाना खुवाएको थियो । नगरका कतिपय स्थानमा सामाजिक संस्था, समूह र व्यक्तिले समेत सामूहिकरुपमा खाना खुवाएको देखिन्थ्यो । उपत्यकामा यो साता कोभिड–१९ का नयाँ सङ्क्रमित भेटिएर सरकारले बन्दाबन्दी कडाइ गरेकाले अहिले सामूहिक खाना खुवाउन रोकिएको छ । महानगरले वडा कार्यालयबाटै राहत वितरण गर्ने गरी खाद्यान्न पठाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक भएका व्यक्तिले आएर लैजानुभएको छ, तर राहत लिन आउने सबै वडामा घटेको छ ।”
बन्दाबन्दी जारी रहँदा महानगरभित्र घर भएकालाई पनि समस्या भएको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो । विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तिले काम गर्न नपाउँदा र कतिपयको रोजगारी भए पनि तलब नपाउँदा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “घर भए पनि राहत माग्दा अरुले के सोच्लान् भनेर उहाँहरु आउन सक्नुभएको छैन ।”
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले झण्डै दुई महिनाको अवधिमा १० हजारलाई राहत बाँडेको छ । बन्दाबन्दीपछि पहिले केही समय दिनमा सयौँजना राहतका लागि आउने भए पनि दुई साता पहिलेबाट यो सङ्ख्या कम भएको नगर प्रमुख रमेश महर्जनले बताउनुभयो । कतिपय मानिस घर फर्किएको र कतिपयले बैंक, सहकारीलगायत संस्था खुलेकाले पैसा झिक्न पाएको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न संस्था र विकास निर्माणका काम हुँदा कतिपय काम गर्न थालेकाले यो समस्या कम भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “काम नभएका घर फर्किएको र यहाँ बसेकाहरु काममा लागेकाले पनि राहत माग्ने घटेको हुनसक्छ ।”
नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने ७५ प्रतिशत नागरिक आ–आफ्नो घर फर्किएको भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुखवासुदेव थापाले बताउनुभयो । अहिले यहाँ भएका र दैनिक खानाको समस्या भएकालाई नियमित दिइरहेको उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि व्यक्तिले मलाई राहत चाहियो भनेपछि उसलाई साँच्चै आवश्यक हो/होइन हेरेर एक घण्टाभित्रमा राहत दिइएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले व्यक्तिसँग नागरिकता, घरबेटीको सिफारिसलगायत कुनै पनि कागजात नमागी राहत दिइरहेको छ । अहिलेसम्म यस नगरपालिकाबाट ६ हजारले राहत लिएका छन् । कतिपय संस्था पनि नगरपालिकासँगको समन्वयमा राहत वितरणमा लागेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई दोहो¥याएर पनि दिइरहेका छौँ ।”
महालक्ष्मीमा सक्नेलाई काम नसक्नेलाई राहत
बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले भने विपन्न वर्गलाई भोको हुन नदिन नयाँ योजना शुरु गरेको छ । बन्दाबन्दीका समयमा भइरहेको विकास निर्माणमा काम गर्न सक्नेलाई काममा लगाएर उनीहरुलाई आवश्यक राहत दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौतामार्फत भइरहेका काममा निर्माण व्यवसायीलाई भनेर यही नगरपालिकामा बसोबास गर्ने काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई काममा लगाइएको नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । नगरपालिका आफैँले पनि यो समयमा कुलो, राजकुलो, पाटीलगायत विकास निर्माणका काम अघि बढाएको छ । दैनिक खानाको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई काममा लगाइएको छ । उनीहरुमध्ये कतिलाई राहतवापत खाद्यान्न र कतिपयलाई आवश्यक पर्दा नगद दिइएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले अशक्त, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई भने आवश्यक मात्रामा राहत दिइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्न सक्ने अवस्थाका मान्छेले यो समयमा पनि कमाएरै खान र परिवार पाल्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।”
भारतले पुन नेपालमा नाकाबन्दी गर्नसक्ने सञ्चारमाध्यको दाबी
आलुले लियो एक बालकसहित चार जनाको ज्यान
यि हुन् पैसै – पैसा भएकी सर्वाधिक बलिउड धनि नायिका प्रियंका चोपडा,जसको कुल सम्पती २८ मिलियन डलर